I-11 yezifundo zeDyunivesithi zasimahla eIreland zaBafundi beZizwe ngeZizwe 2022
Septemba 29, 2021 UHarrison uGrace
Izifundo zasimahla iiyunivesithi eIreland zabafundi bamanye amazwe ziyakhohlisa kodwa kule posi yebhlog, siyenze yacaca njengekristale. Ezi yunivesithi zikhuthaza inqanaba lemfundo labafundi abasebenza kubo ngokubanika imfundo yasimahla. Nangona kunjalo, baneemeko ezahlukeneyo abavuleleke kuzo abafundi.
I-Ireland lelinye lamazwe amane e-United Kingdom aziwa ngeendawo ezimaxongo kunye nomoya wokubuk 'iindwendwe. Iyaziwa njengelona lizwe linobuhlobo emhlabeni elenza ukuba libe yeyona nto iphambili phakathi kwabafundi bamanye amazwe kuba baphathwa kakuhle kwaye banikwa olona nyango lufanelekileyo xa kuthelekiswa namanye amazwe.
Olunye lolu “nyango lulungileyo” olunanditshwa ngabafundi bamanye amazwe eIreland kukubonelela ngezifundo kunye nezifundo zasimahla kwiiyunivesithi. Nangona kunjalo, njengoko benditshilo apha ngasentla, iiyunivesithi zasimahla zezifundo zinobuqili kodwa uya kuziqonda kwimizuzu embalwa.
Zonke iiyunivesithi zikarhulumente eIreland zisimahla kubemi bayo nakubemi abasisigxina ababizwa ngokuba ngabafundi basekhaya. Aba bafundi basekhaya baxolelwe ekuhlawuleni iifizi zezifundo kodwa bahlawula iifizi zesicelo kunye nezempilo. Abanye abafundi abakhululwayo ekuhlawuleni iifizi zezifundo ngabafundi abavela kwi-European Union (i-EU) kunye ne-European Area Area (EEA) amazwe.
Ke, ukuba uvela nakweyiphi na i-EU / i-EEA amazwe ungafundela simahla eIreland ngelixa abafundi abavela kumazwe angengawo e-EU / EEA kufuneka bahlawule iifizi zokufunda. Nangona kunjalo, kukho iiyunivesithi eziphantsi zokufunda kunye nezifundo eIreland zabafundi bamanye amazwe.
Ke, ngelixa ungumfundi ongenguye we-EU / we-EEA ungasifaka isicelo sokufunda kule nkqubo yakho yesidanga kuyo nayiphi na iiyunivesithi zaseIreland. Ezi zifundo kunye neeyunivesithi eziphantsi eIreland zabafundi bamanye amazwe kuxoxwe ngazo apha ngezantsi. Ukuhamba ngokukhawuleza, unokufuna ukusebenzisa iziqulatho ezingezantsi.
1 Kuthetha Ukuthini Ukuya Esikolweni “Usimahla?”
2 Ngaba kukho iiyunivesithi zasimahla ezifundwayo eIreland?
3 Ngaba aBafundi beZizwe ngeZizwe baya kwiYunivesithi eIreland Isifundo sasimahla?
4 Izifundo ezithandathu eIreland zaBafundi beZizwe ngeZizwe
4.1 1. INational University of Ireland (NUI) Scheme Scheme yaBafundi abakhubazekileyo
4.2 2. IBhunga leSizwe le-Blind Ireland (i-NCBI) iBhasari yaseGerard Byrne
4.3 3. UMbutho waseSt Vincent de Paul weBhasari yezeMfundo noQeqesho
4.4 4. UVERSITY Imfundo ePhakamileyo yaBafundi yaBafundi aBadala
4.5 5. U-Erasmus +
4.6 6. Naughton Ulwabiwo-mali
5 IYunivesithi ezingabizi kakhulu eIreland zaBafundi beZizwe ngeZizwe
6 I-FAQs kwiiyunivesithi zasimahla eIreland zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Kuthetha Ukuthini Ukuya Esikolweni “Usimahla”?"
"Ukufundela simahla" ibinzana elichaza ithuba elinikwa abafundi abanqwenela ukufumana isidanga kumaziko abo ngaphandle kokuhlawula nayiphi na imali yezifundo abazifundileyo. Olu hlobo lwamathuba anikwa ziiyunivesithi zasimahla zabafundi abafanelekileyo kwizifundo okanye abangenakho ukuhlawula iifizi zabo zezifundo.
Izifundo zasimahla iiyunivesithi azihlawulisi abafundi ngokuthatha iikhosi. Abahlawulisi abafundi ukuba babhalise, bahlawulele iincwadi okanye ezinye izinto zekhosi. Izifundo zasimahla iiyunivesithi eIreland zabafundi bamanye amazwe zivulelekile kubo bonke abafundi (abahlali nakwamanye amazwe) kwihlabathi liphela.
Ngaba kukho iiyunivesithi zasimahla ezifundwayo eIreland?
Ukufunda e-UK kubiza kakhulu xa kuthelekiswa nokufunda e-Ireland. Kukho iiyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe ekwavulelekileyo kubemi baseIreland. Nangona kunjalo, zivulekile phantsi kweemeko ezithile.
Ukungabikho kweenkqubo zokufunda, abafundi bamanye amazwe banokufaka izicelo njengoko iindleko zemfundo eIreland zitshiphu ngokuthelekisa ezinye iiyunivesithi kwihlabathi liphela. Ngokumalunga neendleko zokuhlala, abafundi abanokulindela ukuhlawula ngaphakathi kwe-EUR 600 ukuya kwi-1000 ngenyanga, kuxhomekeke kwindawo kunye neemfuno zomfundi.
Kubafundi bamazwe aphesheya, kwiiyunivesithi zikarhulumente iifizi zokufunda zivela kwi-6,000 ukuya kwi-12,000 EUR ngonyaka. Kwiinkqubo zesidanga sokuqala, iifizi zokufunda zivela kwi-6,150 ukuya kwi-15,000 ye-EUR ngonyaka.
Ngaba aBafundi beZizwe ngeZizwe baya kwiYunivesithi eIreland Isifundo sasimahla?
Ewe. Kukho iimeko ezithile ekufuneka kuhlangatyezwane nazo abafundi bamanye amazwe ukuba bonwabele imfundo yasimahla eIreland. Imeko kukuba kufuneka ube ungumfundi kuyo nayiphi na i-EU okanye amazwe e-EEA ukuze uyonwabele imfundo yasimahla eIreland.
Abafundi abavela kumazwe angengawo e-EU / e-EEA kufuneka bahlawule iifizi zokufunda eziyimfuneko. Nangona kunjalo, kukho amathuba okubhaliselwa kwaba bafundi ukuze bahlawule iifizi zabo. Apha ngezantsi kukho amathuba oncedo lwezezimali.
Izifundo ezithandathu eIreland zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Iiyunivesithi zaseIreland zitshiphu, enyanisweni, ziphakathi kweyona yunivesithi zibiza imali encinci eYurophu kubafundi bamanye amazwe. Njengomfundi wamazwe aphesheya eIreland, ukufaka isicelo sokufunda apha ngezantsi kuya kunciphisa kakhulu iindleko zemfundo yakho eIreland.
Inkxaso mali yokufunda eIreland yabafundi bamanye amazwe zezi:
Inkqubo yeGranti yeYunivesithi yaseIreland (NUI) yaBafundi abakhubazekileyo
IBhunga leLizwe le-Blind Ireland (i-NCBI) iBhasari yaseGerard Byrne
Umbutho waseSt Vincent de Paul weBhasari yezeMfundo noQeqesho
UVERSITY Imfundo ePhakamileyo yaBafundi yaBafundi aBadala
1. INational University of Ireland (NUI) Scheme Scheme yaBafundi abakhubazekileyo
Esi sikimu yenye yeeyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe ababonelela ngenkxaso yemali kubafundi abasaqhuba kakuhle abanokukhubazeka komzimba kunye / okanye ukukhubazeka kwengqondo kwaye bakunyaka wokuqala wenkqubo yesidanga sokuqala kwiikholeji ezamkelweyo ze-NUI.
Cofa apha ngolwazi oluthe kratya
2. IBhunga leSizwe le-Blind Ireland (i-NCBI) iBhasari yaseGerard Byrne
Ibhasari yonyaka yeGerard Byrne yenye yeeyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe abanokungaboni kakuhle ukungena okanye okwangoku kwimfundo yenqanaba lesithathu. Ibhasari yonyaka inikezelwa ngexabiso le- $ 1,500 ngonyaka ukuya kuthi ga kwinqanaba lesidanga sokuqala.
Ngokuxhomekeke kwimpembelelo ye-Covid-19, i-NCBI inokunika i-internship yeenyanga ezi-6 kumntu omnye ofumana ibhasari ngonyaka, ebanceda ukuba bafumane amava omsebenzi ukulungiselela ngakumbi ingqesho.
3. UMbutho waseSt Vincent de Paul weBhasari yezeMfundo noQeqesho
Umbutho waseSt Vincent de Paul weBhasari yezeMfundo noQeqesho uvela kwiiyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamazwe aphesheya abaxhasa abafundi bayo yonke iminyaka abanokuthi bangakulungeli ngokwezimali ukufikelela okanye ukuhlala kwiinkqubo zemfundo noqeqesho kwinqanaba lesithathu.
4. UVERSITY Imfundo ePhakamileyo yaBafundi yaBafundi aBadala
I-Uversity's Scholarships zivela kwiiyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe abajolise ekuvuleni izakhono zabafundi abadala. Benza oku ngokunikezela ngenkxaso yemali efanelekileyo. Ubungcali beeScholarships bujolise ekususeni izithintelo zemali ukulandela isidanga se-bachelor okokuqala ngqa.
I-Scholarship ayikhawulelwanga kwimimandla ethile kwaye iya kwenza ukuba abafumanayo bagqibe isidanga sebhatshela kwelinye lamaziko athatha inxaxheba kwiRiphabhlikhi yaseIreland okanye eMantla eIreland.
5. U-Erasmus +
U-Erasmus + yinkqubo ye-EU yokuxhasa imfundo, uqeqesho, ulutsha kunye nemidlalo eYurophu. U-Erasmus + yenye yeeyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe ezinamathuba abantu bayo yonke iminyaka, ukubanceda baphuhlise kwaye babelane ngolwazi namava kumaziko nakwimibutho yamazwe ahlukeneyo.
Ukufundisisa phesheya yeyona nto iphambili ku-Erasmus + kwaye kuye kwaboniswa ukuba kunefuthe elihle kumathemba omsebenzi kamva. U-Erasmus + unika nethuba lokudibanisa ukufunda kwelinye ilizwe kunye noqeqesho. Amathuba ayafumaneka kubafundi abakwi-bachelor, master okanye kumanqanaba obugqirha.
6. Naughton Ulwabiwo-mali
I-Naughton Scholarships zaziswa ngo-2008 ukukhuthaza ukufundwa kwezobunjineli, isayensi kunye netekhnoloji kwinqanaba lesithathu eIreland. Kunyaka ngamnye inani labafundi ababalaseleyo banikwa izifundi zokufunda kwinqanaba legraduate kwiyunivesithi exhaswa ngurhulumente okanye iziko elikwinqanaba lesithathu eIreland.
IYunivesithi ezingabizi kakhulu eIreland zaBafundi beZizwe ngeZizwe
IYunivesithi yaseKholeji, eKork
Ikholeji yaseGriffith, eDublin
1. IKholeji yaseTrinity yaseDublin
Yeyiphi imali yokufunda eyi-17,000 ye-EUR, eyenza ukuba ibonakale ngathi yeyunivesithi yasimahla eIreland yabafundi bamanye amazwe.
Ikholeji yaseTrinity i-Dublin lelinye lamalungu eYunivesithi yaseDublin, ikholeji yaseTrinity yaziwa kakhulu kwaye iphambili eyunivesithi yophando yoluntu ebekwe kwikomkhulu laseDublin. Yayisungulwa kwi-1592 kwaye yenye yeyona yunivesithi indala yaseIreland. Iyunivesithi yenye yeeyunivesithi ezisixhenxe zakudala zaseBritane naseIreland.
2. IYunivesithi yaseLimerick
Inayo imali yokufunda njenge-EUR 1200. iYunivesithi I-Limerick isekwe kwi-iconic yedolophu yaseLimerick kwingingqi yeMidwest yeIreland. IYunivesithi yaseLimerick yenye eyunivesithi yophando eyaziwayo. Yayisungulwa kwi-1972 kwaye yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo kwizifundo zabafundi bamanye amazwe eIreland.
3. KwiKholeji yaseYunivesithi, eKork
Imali yesikolo: Ukususela kwi-EUR 10,000
Ikholeji yaseYunivesithi (UCC) ekwisixeko sesibini ngobukhulu eIreland, (Cork), yikholeji yeYunivesithi yeSizwe yaseIreland. Yayisungulwa ngonyaka we-1845 njengenye yeekumkanikazi zeKumkanikazi yaseCork, eBelfast naseGalway.
4. ISikolo soShishino saseDublin
ISikolo soShishino saseDublin sineemali zokufunda ukusuka kwi-EUR 5000 ukuya kwi-7000.
Isikolo soShishino saseDublin liziko labucala lemfundo ephakamileyo elasekwa okokuqala kwi1975.
Ekusungulweni kwasekuqaleni njenge-Akhawuntingi kunye neKholeji yezoShishino, le kholeji yasekwa ukuze ihlangabezane "nemfundo esekwe kurhwebo" ebonakala ngathi iyasilela eIreland ngexesha lokusekwa kwayo.
5. Ikholeji yaseGriffith eDublin
Imali yesikolo: Ukususela kwi-EUR 12,000
Ifunyenwe kwidolophu elikomkhulu laseDublin, iGriffith College Dublin liziko labucala lemfundo ephakamileyo. Eyasungulwa kwi-1974, yenye yeekholeji ezinkulu kunye nezindala ezizimeleyo ezisekwe kweli lizwe. Ikholeji yadalelwa ukubonelela ngoqeqesho lweshishini kunye nolwabiwo mali kubafundi bayo.
Nangona kunjalo, ukungena kwenye yeefizi zokufunda ezisezantsi eIreland ngoncedo olunye okanye nangaphezulu zokufunda zabafundi bamanye amazwe kungenza imfundo ibe simahla. Ke ngoko unokuba ziiyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe.
I-FAQs kwiiyunivesithi zasimahla eIreland zaBafundi beZizwe ngeZizwe
1. Ngaba imfundo yasimahla eIreland yabafundi bamanye amazwe?
A: Iidigri zesidanga sokuqala simahla kubemi baseIreland. Iindleko zihlawulwa liGunya leMfundo ePhakamileyo (i-HEA). Ayizizo zonke iikhosi zesidanga sokuqala ezibonelelwa ziiyunivesithi zikarhulumente simahla.
Ukuze abafundi bamanye amazwe baxhamle "kwilinge lokuhlawula simahla", kufuneka benze isicelo senkqubo yenkxaso-mali karhulumente kwaye babonise ukuba bafanelekile. Abafanelekanga ukuba:
-Sele benesidanga sokuqala
-Basele benesidanga sokuqala
-Baphinda unyaka wokufunda.
Ubuzwe, inqanaba lokufudukela kwelinye ilizwe, indawo yokuhlala, kunye neemfuno zekhosi zezinye iikhrayitheriya ezinokulungela umfundi ukuba afumane enye yeeyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe.
2. Ndingafunda njani eIreland mahala?
A: Yiba namabanga aphezulu ngaphambi kokuya eIreland: Sihlala sihlelwa ziirekhodi zethu zemfundo. Abantu kunye nabahlohli bahlala besekela ukusebenza kwethu kunye nolindelo lwabo kwimigqaliselo yangaphambili ebekwe kwiimvavanyo zethu zemfundo.
Oku kuyinyani kuzo zonke iiyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe. Imisebenzi eyongezelelweyo yekharityhulamu ikwajongwa ngelixa ifaka isicelo kwenye yeeyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe. Esi sizathu sokuba kufuneka sizame ukufumana iirekhodi ezibalaseleyo zemfundo ukuze sifumane isicelo ngokulula kwiiyunivesithi zasimahla eIreland.
Ukwakha isicelo esifanelekileyo ngovavanyo olulungileyo, izincoko kunye nezinye iimfuno:
Wonke umfundi kulindeleke ukuba akhe isicelo esifanelekileyo kwiiyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe. Ukufaka isicelo kwezi yunivesithi kufuna ixesha, umonde kunye nokuzinikezela kuba kunokusetyenziswa njengendawo yokuma ukuze ufumane umbono woluhlobo lomfundi onokuthi ubekho xa wamkelwe eyunivesithi.
Thatha ixesha lakho ubhale isincoko esifanelekileyo esibonisa ukuba ungubani na kanye njengomfundi.
Cela uncedo ngendlela yokwenza isicelo esifanelekileyo: Soloko ufuna uncedo xa ubhala isicelo sakho njengoko oku kunendlela yokubonelela ngezixhobo zamanqaku asemgangathweni kunye neephothifoliyo. Uncedo oluvela kwabanye abantu abanolwazi lwento ekufuneka bayenzile kunye namaxwebhu ekufuneka esetyenzisiwe kufuneka afezekiswe ukuze uxinzelelo lube lula.
Faka isicelo sokufunda kwiiyunivesithi zaseIreland: IYunivesithi yaseDublin eseDublin naseTrinity College eDublin yimizekelo yeekholeji ezithandwayo ezibonelela ngezifundo kubafundi babo. Inkqubo yokufunda izindlela ezilungileyo zokuya simahla nakweyiphi na iiyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe. Ezi nkqubo zokufunda zihlala zilayishwa kwiwebhusayithi yeyunivesithi.
Iinkqubo zescholarship zibonelela ngengxowa mali yokufunda enika abafundi amandla okuhlangabezana neemfuno zabo zezemali kwiiyunivesithi ezinjengeencwadi kunye nezinye iimali.
Khangela iiyunivesithi ezinamaxabiso aphantsi eIreland: Oku kwenzelwe abo bangenayo imali yokufunda. Ixabiso eliphakathi lokufunda eIreland lijikeleze i- $ 7,000 kwaye ixhomekeke kwindawo yokufunda. Abafundi bayacetyiswa ngokubanzi ukuba baye eyunivesithi efikelelekayo ngakumbi ngelixa besenza isicelo nakweyiphi na iiyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe.
Umsebenzi wexeshana eIreland: Oku ngakumbi kubafundi abanee-visa zabafundi, ukusebenza eIreland kuya kuvunyelwa kuphela ukuba uya kwizifundo ezidweliswe kuLudwe lweeNkqubo eziLungeleyo (ILEP) ezidweliswe kwiwebhusayithi karhulumente, ngenani eliqingqiweyo leeyure ngeveki kwaye Ngexesha ngalinye.
Ezi kunye nezinye ezininzi iindlela zokungena kwiiyunivesithi zasimahla eIreland zabafundi bamanye amazwe.
Ukuqukumbela, iiyunivesithi zaseIreland zitshiphu kwaye zineenkqubo zemfundo esemgangathweni ezihlala abafundi bamanye amazwe kunye nabemi bayo.
Izidingo zeYunivesithi yaseTrent | Imirhumo, iiNkqubo, iScholarship, iZikhundla
I-13 yeeDiploma eziPhezulu eKenya
I-10 yeePost Post Graduate Scholarship eCanada yabo bonke aBafundi
Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Iingqapheli zase-UK Ngaphantsi kweeSchoolships
iidyunivesithi eziphantsi eIreland zabafundi bamanye amazweizifundiswa eIreland zabafundi bamanye amazweIzifundo zasimahla iiyunivesithi eIreland zabafundi bamanye amazwe
Post Previous:Izizathu ezi-8 zokuba kutheni kufuneka ufunde malunga nokwahluka kunye nokubandakanywa
Okulandelayo Post:Izikolo ezili-12 eziBalaseleyo zeBiology eCarlifonia